ချစ်ပေးအုံးဝသေးဘူး – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 26, 2021 Author admin	Comments Off on ချစ်ပေးအုံးဝသေးဘူး
၂၀၁၁ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့ အချိန်ည ၁၀နာရီခွဲခန့် မန်းလေးတောင်ခြေရှိဟော်တယ်တစ်ခု၏ ကားပါကင်တွင်……… “တီ..တီ..တီ..တီ” “ဟယ်လို..လေးခပြော” “သားငယ်…မင်းခိုင်ဘယ်ရောက်နေလဲကွယ်” “သားအခု ….ဟိုတယ်မှာ နယူးရီးယားပါတီရှိလို့ဟိုကောင်လေ ဆွေကြီးတို့ လုပ်တာပွဲက အဲ့ပွဲမှာရောက်နေတယ်” “အော်….အေးသား မမကြီးက လေးလေးကိုဖုန်းဆက်ခိုင်းလို့ သိပ်နောက်မကျစေနဲ့နော် တော်ကြာ ဆူနေမယ်သားသား မမကြီးစိတ်ဆိုးတာကို လေးလေးလဲကြောက်တယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါလေးလေး သားနောက်မကျအောင်ကြိုးစားပါ့မယ် ဘိုင်သယ်လ်ဝေးလ် ကြိုပြောထားမယ် ဟက်ပီးနယူးရီးယားလေးလေး” “အေးအေး ယူတူးပါကွယ်သားလေး” ပိုင်နိုင်မင်းခိုင် တစ်ယောက် ဖုန်းချပြီးနောက် ကားကိုသေချာပါကင်ထိုး၊စက်သတ်လိုက်ကာ ခါးပါတ်ကိုငုံချွတ်လိုက်သည်။ “ဒုံး…”အသံကျယ်ကြီးနှင့်အတူ သူ့ကားလေး တုန်ခါသွားပြီး ခေါင်းနှင့်စတီယာ တိုင်ဆောင့်လေသည်။ သေပါပြီကွာ ဘယ်ကကောင်လဲမသိဘူး နမိတ်ပြတာလား ဘာလားတော့မသိဘူး ကားကတော့အနောက်ကနေ အဆောင့်ခံလိုက်ရသည်။စိတ်တိုတိုနဲ့ နောက်က ကားကို ထွက်ပြီးပြသနာရှာမည် အလုပ် တံခါးဘေးနားမှာ အရိပ်ကလေးကျလာလေသည်။ “ဆောရီးနော် အကို နေနီ့ကားဘက်ဆုတ်တာ အကို့ကားနဲ့ညှိသွားတယ် နေနီဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲဟင် အကို” မင်းနိုင်ကားတံခါးနားမှာ လမင်းသာသွားသည်။ချိုသာသောအသံ၊ပြေပြစ်သောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အတူ ဂျင်းန်ဘောင်းဘီအကျပ်၊စပို့ရှပ်တို့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားသော လတစ်စင်းတံခါးနားလာပြီးစကားပြော နေသည်။ မဖြစ်ဘူး လှတယ်ဆိုပြီး အလျော့ပေးလိုက်လို့ကတော့ အိမ်အပြန် လေးလေးနဲ့ နပမ်းသတ်နေ ရမယ်၊ သူ့ကားကို သိပ်ပြီးပေးစီးချင်တာမဟုတ်ဘူး အက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး အလျော်မရပဲအိမ်ပြန်လို့ကတော့ နောင်ဂျိန်ကသေချာနေပြီ။ “မင်းဘယ်လိုများ နောက်ဆုတ်သလဲကွာ စိတ်ညစ်ပါ့ လူများယူလာတဲ့နေ့မှကွာ ငါတော့သေချင်တယ် မင်းကွာ တကယ်ကွိုင်ပဲ ကျွတ်စ်” “ဟို….ဟိုလေ လူများကားဆိုရင်လဲ နေနီ ပိုင်ရှင်ကို ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးကျေနပ်အောင် တောင်းပန်ပါ့မယ်။
ပြီးတော့ ကားကို နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်လို့လဲပြင်ပေးပါ့မယ်” မျက်နှာငယ်လေးနှင့် တောင်းပန်နေရှာသော ကလေးမအား သနားသော်လည်း ညှာတာလို့ မဖြစ်ပေမဲ့ နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အလျော့ပေးဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ “တောင်းပန်တာကတော့မတောင်းပန်နဲ့ရတယ် ငါပဲနားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်မယ် ကားကိုသာဘယ်လို ပြင်ပေးမယ်ဆိုတာပြော” “အကို ဒါကနေ့နီဖုန်းပါ မနက်ဖြန်ကျရင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ကားပြင်ဖို့ကိစ္စကို နေနီ တာဝန်ယူပါတယ်နော် စိတ်ချပါအကို” “အေးအေး ဒါဆိုလဲပြီးတာပဲလေ ကိုင်းသွားပြီ” ပိုင်နိုင်မင်းခိုင် ကောင်မလေးပေးသော စာရွက်ကို အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ပြီး ဆက်လျှောက်လာခဲ့လေသည်။ “ဟူး ကနေ့ ကံမကောင်းပါလား….” မြူးကြွနေသော တီးလုံးသံများနှင့် အတူ ကခုန်လျှက်ရှိသောလူအုပ်များကြားထဲမှ ဆံပင်များဝဲနေအောင် ကနေသည့် ဝင့်ဝါပိုင်မှူးကို တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ထို့နောက် မဲ့ပြုံးပြုံးကာဘားကောင်တာကို ဦးတည်ပြီးတော့ဆက်လျှောက် လာခဲ့လိုက်သည်။ ဝန်ထမ်းကောင်လေးကို ဒဗယ်လ်ဘလက် နှစ်ပက်နှင့် ဆော်ဒါ မှာလိုက်ပြီးနောက်၊ ဆေးလိပ်ကို ထုတ်ကာဖွာရှိုက်လိုက်သည်။လေးငါးခါလောက် ဖွာရှိုက်ပြီးသည့် အချိန်တွင် သူ့ရှေ့ သို့ အရက်ခွက်ကလေးရောက်လာသည်။ “ပိုင်….ယူ တအားသောက်နေလားဟင်” နောက်လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူး သူသိလိုက်ပြီဝင့်ဝါအသံ၊ အရက်ကို တစ်ကျိုက်လောက်သောက်ပြီးနောက် ပြုံးပြုံးလေးဖြင့် နောက်လှည့်ကာ “ဘယ်သူများလဲလို့…. နယူးရီးယား ညရဲ့ ဘုရင်မပါလား” “တော်စမ်းပါပိုင်ရာ တို့ဆေးလိပ်နည်းနည်းလေးလောက်ဖွာချင်လို့လိုက်ရှာနေတာ အခုယူ့ကိုတွေ့လို့….ပလိစ်” ဝင့်ဝါမျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ရင်း သူသောက်လက်စဆေးလိပ် ကို မေးငေါ့ပြသည်။နှုတ်ခမ်းကိုပါးပါးလေးဖြင့် ဆေးလိပ်ဖွာနေသော ဝင့်ဝါကို သူကြည့်မိသည်၊ တကယ် တမ်းပြောရမယ်ဆိုလျှင် ဝင့်ဝါဆိုတာက သူနဲ့ညိချင်နေသည့် အမေနှင့် လေးလေးတို့ စီးပွားဖက်တစ် ယောက်၏ သမီးဖြစ်သည်၊ နှစ်ဆယ်ရာစု၏ သမီးပျိုဖြစ်သည့်အခါအားလျော်စွာ ပေါင်လည်လောက်ရှိသော တဆက်တည်းဂါဝန် အနက်ရောင်အကျပ်ဖြင့် ကနေ့နယူးရီးယားညအတွက် ပုရိသအပေါင်း၏ မျက်လုံးထဲ တွင် နတ်သမီးမဟုတ်ရင်တောင် မော်ဒယ်တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေသည်။
အဲ့တော့ ကိုယ်လုံးတောင့်တောင့် ၊မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေး နှင့် ချစ်စရာကောင်းသော သူမနား ပုရိသတွေဝိုင်းနေသည်မှာ မဆန်းတော့၊ ဆန်းသည်က ထို နတ်သမီးက သူနားလေးလာကာ ဆေးလိပ်သောက်သည့်ကိစ္စ ကလပ်ထဲရှိ လူအများ၏ မျက်လုံးက သူမထံသာမက သူထံပါရောက်လာကြသည်။ “ပိုင်….လာဟာ ကကြရအောင်” “အိုကေလေ….သွားတာပေါ့” နောက်ဆုံးတစ်ကျိုက်ကိုမော့ချလိုက်ပြီး ဝင့်ဝါလက်ဆွဲခေါ်ရာနောက်သို့ လိုက်လာခဲ့သည်။ မီးရောင်စုံအောက် ကနေသောလူများနှင့်ရောကာ အလည်တည့်တည်အရောက်တွင်တော့ စည်းချက်နှင့် စတင် လှုပ်ရှားသည်ဝင့်ဝါကလည်း သူ့ကို ဖက်ကာ ခန္ဒာကိုယ်ကို ခါယမ်းနေသည်၊ ထို့နောက် သူ့ဆီးခုံးနှင့် ဖင့်ကိုပွတ်ကာ ကလေသည်၊ ပိုင်နိုင်မင်းခိုင် တစ်ယောက်စိတ်တွေကြွလာသည်၊ ကနေသောလူများကြားထဲ ဝင့်ဝါကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်လိုက်မိသည်။ ရုတ်တရက် တီးလုံးသံများတိုးသွားသည်၊ လူတစ်ယောက် ဒီဂျေစင် ပေါ်သို့တက်လာ သည် တခြားသူမဟုတ်ဘူး သူ့သူငယ်ချင်း၊ အခုကလပ်ရဲ့ Organizerလဲဖြစ် ၊ဒီဂျေလဲဖြစ် တဲ့ စည်သူဆွေမောင် “ဘော်ဒါတို့အခုကစပြီး Countdown ရေမယ် နယူးရီးယားကို ကြိုလိုက်ရအောင် ရယ်ဒီ…….ဖိုက်….ဖိုး….. သရီး…. တူး…ဝမ်း… Happy New Year” “ဝေး……….” သီချင်းသံတို့ ဆူညံ လာသည်။ကလပ်လည်းပြန်လည်ဆူညံလာပြီးနောက် ဝင့်ဝါလဲသူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာ သည်။ လက်မောင်းဖြူဖြူအိအိလေးနှစ်ဖက်က ခန္ဓကိုယ်ကိုသိုင်းဖက်လာသည် ခေါင်းလေးရင်ခွင်ထဲပြိုကျ လာသည်။ဘယ်ရမလဲ ပြန်ဖက်လိုက်တာပေါ့ဒီအခြေအနေကို လိုချင်လို့ ကို သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးလုပ်တဲ့ ဒီပါတီကို သူ့ကိုဖိတ်ထားတာလေ ရင်ခွင်ထဲကမိန်းကလေးကို မေးစေ့ကနေအသာလေးကိုင်ပြီး ပန်းသွေးရောင်ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို နမ်းလိုက်သည်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းသား တွေကို အသာအယာ ငုံစုပ်လိုက်ပြီးနောက်တော့အနမ်းအရှည်ကြီးကို ဖန်တီးလိုက်ကြသည်။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ အနမ်းတွေအရှိန်တက်လာကြသည် သူ့ကိုဖက်ထားတဲ့ ဝင့်ဝါရဲ့လက်တွေကလဲတင်းကျပ်လာသလို၊ သူရဲ့လက်တွေကလဲ ဝင့်ဝါရဲ့တင်သားတွေကို ဖြစ်ညှစ်နေမိသည်။ “ပိုင်…ကလပ်ထဲမှာနော် လူများတွေရှိသေးတယ်” “လာ….”ဒီတစ်ခါလက်ဆွဲခေါ်သူက ပိုင်နိုင်မင်းခိုင်၊ ဝင့်ဝါတစ်ယောက်မငြင်းဆန်နိုင်တော့ပဲ နောက်မှကပ် လိုက်သွားမိတော့သည်။
ဒီဂျေစင်အောက်နောက်ဖက်တွင် ရပ်နေသော သူငယ်ချင်းဆီသွားကာ “ဆွေကြီး…ငါ့ကို သော့ခနလောက် အနောက်ခန်းထဲမှာနားချင်လို့ ” “အော်အေးအေး..ရော့ ပိုင်ကြီးနားရုံပဲနားနော် မောစရာတွေမလုပ်နဲ့ ဟဲဟဲ” “မသာကြီး….”ပိုင်ကြီး အသံတိတ်အံကြိတ်ဆဲရင်း ဝင့်ဝါလက်ကလေးကို ဆွဲပြီး နားနေခန်းသို့ ဝင်သွားတော့သည်။အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ စကားမပြောဖြစ်တော့ဘူး အလုပ်နဲ့သက်သေပြကြသည်။ လော့ချပြီး ပက်ပက်စက်စက်နမ်းသည် နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်သည်။ သူ ဝင့်ဝါ ရဲ့နားကလေးကို လျှာဖြင့် ကလိသည်၊ ဝင့်ဝါကလဲ သူ့လည်တိုင်ကို စုပ်နမ်းသည်။ထို့နောက် တဆက်ထဲ ဖြစ်နေသောဂါဝန်လေးကို အောက်ကနေ အပေါ်သို့လှန်ချွတ်လိုက်လေသည်၊ သူခဏတာ မှင်သက်မိသွား သည် ဝင့်ဝါရဲ့တကယ့် အလှစစ်စစ်ကို တွေ့လိုက်ရလို့ ၊ ရင်သားလုံးလုံးလေးကို ဖုံးကွယ်ထားသော ဘရာကို ချိတ်ဖြုတ်ပြီးသည်နှင့် ငုံစုပ်လိုက်လေတော့သည်။ “အာ့……..”ဝင့်ဝါထံမှ စုပ်သပ်ညည်းညူသံ မထင်မရှားထွက်လာသည်။သူ ဝင့်ဝါရဲ့နို့တွေကို အားရအောင်စို့ ပေမဲ့ မဝသလိုပဲ၊ စိတ်သိပ်မရှည်တော့ဘူး သူ့အဝတ်တွေကို ချွတ်လိုက်ပြီးနောက် ဝင့်ဝါကို နံရံမှာကပ်လိုက် ပြီး ထိုင်ချလိုက်သည်သူ့မျက်နှာနဲ့ဝင့်ဝါ ပိပိနဲ့ ကွက်တိ နမ်းမယ်လုပ်လိုက်တော့ ဝင့်ဝါကခေါင်းကို တွန်းထုတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်သူ့ ကို ဆွဲထူကာ သူမက ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ထို့နောက် လွေတော့သည် ဝင့်ဝါကြိုးစားပမ်းစားဖြင့် သူ့ဒုတ်ကို တဝက်ကျော်ကျော်ဝင်အောင်ငုံစုပ်ပေးသည်၊ ဥတွေကို ငုံစုပ်ပေးသည်၊ စိတ်လွတ်ပြီး သူဒုတ်နဲ့ ဝင့်ဝါပါးစပ်ထဲကို ဆောင့်ထည့်နေမိသည်၊ မဖြစ်တော့ဘူး သူပြီးချင် လာပြီ ဝင့်ဝါကိုဆွဲထူလိုက်ပြီး နံရံနဲ့ မျက်နှာ အပ်စေလိုက်သည်။ ထို့ နောက် ဝင့်ဝါပေါင်တံများကို ဖြဲလိုက်ပြီး အနောက်မှနေရာယူပြီး ဒုတ်ကို ပိပိနဲ့ တေ့ပြီး တထစ်ချင်းသွားလိုက်သည်။ “အာ့……..” “အား..ရှီး…ဖြေးဖြေး” “အား…” “ရလား…ငါဆောင့်တော့မယ်နော်” ဝင့်ဝါဘာမှ ပြန်မပြော အောက်နှုတ်ခမ်း လေးကို ကိုက်ကာ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ပိုင်နိုင်မင်းခိုင် သူ့ရဲ့လက်တွေနဲ့ ဝင့်ဝါနို့တွေကိုဆုပ်နယ် ကိုင်တွယ် လိုက်ရင်း ဆောင့်တော့သည်။ “ကောင်းတယ်ပိုင်…ဆောင့်ဆောင့်….ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင့်ပေး”ဆောင့်ရင်း အရှိန်ရလာတော့ ဝင့်ဝါ ဖင်ကို နောက်ပြန်ကော့ကော့ပေးလာသည်။
ညည်းညူသံတွေထွက်လာသည် ပြီးတော့မယ် သူလဲပြီးတော့ မယ် ဝင့်ဝါလဲကောင်းအောင် အားပြင်းပြင်းအရှိန်ပါပါနဲ့ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်သည်။ “ အား… အား..ပြီးပြီ ပိုင် ပြီးပြီ…အားးးးးးး” “အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ပိုင် ကောင်းတယ် ပိုင့်ကိုချစ်တယ်ကွာ” ဝင့်ဝါကလဲ အခုကျမှ သူ့ပိပိနဲ့ဒုတ်ကိုလာညှစ်သည်၊ဆက်တိုက်ကလဲဆောင့် ပိပိကလဲညှစ်ပေးနေတော့ ကောင်းလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း ဒုတ်တလျှောက်လုံးပူထူလာပြီး ဝင့်ဝါ၏ ပိပိထဲသို့သူ့သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ထို့နောက် နံရံနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော ဝင့်ဝါကို လည်ပင်းနှင့် ဂုတ်သားလေးကို အသာလေးခဲလိုက်ရင်း “အရမ်းကောင်းတယ်ဝင့်ရယ်” “ပိုင် ဝင့်ကိုချစ်လားဟင်?” “အင်း..ချစ်တယ်” “ဝင့်လဲ ပိုင့်ကိုချစ်တယ်”ပိုင်နိုင်မင်းခိုင်တစ်ယောက်မျက်နှာပေါ်နေထိုးခံရချိန်တွင်နိုးလာသည်။ အား…..တစ်ကိုယ်လုံးနုန်းချိချိကြီးဖြစ်နေပါလား၊အင်းလေ မနေ့က ကဲခဲ့တာကိုး ကဲတာကလဲတော်ရုံမဟုတ် မနေ့က သူနဲ့ဝင့်ဝါချစ်ခဲ့ပြီးတော့ အပြင်ပြန်ထွက်ကာကျုံးပတ်ခဲ့ကြသည်၊ပြီးတော့ ပါတီကိုပြန်လာပြီးထပ် ချစ်ကြသေးသည်ကိုး ညသုံးနာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်သည်။အမေတို့မနိုးအောင်လို့ဆူဆူညံညံ မလုပ်ပဲ အသာလေးဝင်အိပ်နေလိုက်တာ အခု ၁၁နာရီထိုးမှနိုးတော့သည်။ အင်း ဒီအချိန်ဆို အမေတို့တောင် နေလည်စာ စားနေလောက်ပြီ ဆူခံရတော့မယ်နဲ့တူတယ် ကိစ္စတော့မရှိ လေးလေးရှိနေရင် အေးဆေးပဲ ကာဗာလုပ်ပေးမယ့် သူရှိရင်တော့ဒေါ်ငွေခကို သိပ်မလန့်သို့ပေမဲ့အသက်အားဖြင့်လေးဆယ်ကျော်ရုံလေးပဲ ရှိသေးသည့် ကရာတေး ခါးပတ်နက်ရထားသူ အမေ၏ မထင်ရင်မထင်သလို ထွက်လာမည့် လက်ဝါးစောင်း ကိုတော့ သတိကြီးကြီးထားရသည်။ “သား…. ပိုင် လာ နေ့လည်စာပဲမှီတော့မယ် အမေကမြီးရှည်ဝယ်ထားတာ မင်းမနိုးသေးတော့ သွန်ပလိုက်ပြီ ထမင်းပဲလာစားတော့” ဟောကြည့် မခက်ချေဘူးလား အသက်ကကြီးလှပြီ စိတ်ကမလျှော့သေးဘူး အမေတို့ကတော့ မနက်စောစောမထနိုင်ကာရှိသေးတယ် သူ့အတွက်မြီးရှည်ကိုသွန်ပစ်လိုက်သည်တဲ့ ကောင်းရော ပိုင်နိုင် သူ့အမေမျက်နှာကိုကြည့်ရင်းရစ်ချင်လာသည်။
“အာ …..အမေကလဲ နိုးနိုးချင်းကြီးထမင်းမစားချင်ပါဘူး မြီှးရှည်ဘယ်မှာလဲ အထုပ်လိုက်ပစ်လိုက်တာဆိုရင် သားပြန်ယူစားမယ်….မိအေးရေ….မိအေး..” “ငပိုင်…………….” “ဗျာ….အမေ” “နင်ငါ့အကြောင်းသိတယ်နော်….. နင်ကတတောင်းစားလား အဲ့တာပြန်ကောက်စားရအောင် …စောစောစီးစီးနော် သေချင်နေတာလား” “မမ ကလဲဗျာ သားပိုင်က သိပါတယ် မမကိုစနေတာပါ သူမျက်နှာကြည့်ပါလား” ရွှေခတစ်ယောက် အမေနှင့် သား ကြားထဲ ဝင်ရောက်ဖြန်ဖြေလေသည်။ “ကဲ သားပိုင် ထိုင်ကွယ်……. ထမင်းစားရအောင်” “ဟုတ်ကဲ့ လေးလေး” ထမင်းထည့်ပေးနေသည့် မိအေးထံမှ ပန်းကန်ကိုလှမ်းယူပြီးနောက် ဇွန်းခက်ရင်းတို့နဲ့သေချာစွာ စားသောက် ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးချိန်တွင်တော့ မထင်မှတ်သည့်တိုက်စစ်ဆင်ခံလိုက်ရသည်။ “သားပိုင် လေးလေးကားကို ညကယူသွားတာ ဘာဖြစ်လာသေးလဲသား” ဟိုက်…. သေပြီ မနေ့ညက လေးလေး ကားကြီး ဝုန်းခံထားရတာ အခုမှသွားသတိရသည်။တဆက်တည်း အားငယ်တိုးရှိုးသည့် မျက်လုံး ဝိုင်းဝိုင်းလေးကလဲ အတွေးထဲဝင်လာသည်။ “ဟို..ဟို…ဟိုလေ ညက လေးလေးဆီကဖုန်းချပြီးတော့ ကားရပ်တာ နောက်ကနေ ကျုံးခံလိုက်ရလို့အဲ့တာ ပြန်ပြင်ပေးမလို့ပါပဲ အခုမှနိုးတာလေ” “နောက်ကနေတိုက်ခံရတာ သေချာလားသား ပြန်ပြင်တာက လေးလေးပြင်လဲရပါတယ် မင်းပြင်လဲ ငါ့ပိုက်ဆံပဲကုန်မှာ ငါကရန်ဖြစ်လာတာလားလို့မေးကြည်တာ့” “အာ..လေးလေးကလဲ ဒီအရွယ်ကြီး ရန်ဖြစ်စရာလားလို့ ကားက ဒီအတိုင်းပဲ နောက်ကနေ တိုက်ခံရတာ” “အေးအေး …အဲ့ဒါဆိုလဲပြီးတာပဲ” “ဟုတ်….”ပါးစပ်ကသာ ဟုတ်ပြောလိုက်သည်။ မျက်လုံးထဲ မှာ အခုချိန်ထိမြင်ယောင်နေတုန်း မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနှင့် ကလေးမလေးကို မလှပေမဲ့ချစ်စရာလေး ဟူး………. ။ ဝင့်ဝါ ကနေ့ ပိုင်နဲ့တွေ့ဖို့ရာကို စိတ်လှုပ်ရှားနေမိသည် အရင်ကလိုခင်မင်ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်လို တွေ့ရမှာမဟုတ်ပဲ ရည်းစားတစ်ယောက်လို သူ့စော်အနေနဲ့တွေ့ဖို့ရာဆိုတော့ အနည်းငယ်တော့စိတ်လှုပ်ရှား မိနေတာဖြစ်သည်၊မထင်မှတ်ပဲ မနေ့ညက ပိုင်နိုင်မင်းခိုင်နဲ့သူ အဆုံးအစွန်ထိဖြစ်သွားကြသည်။
တော်ရုံဆို ဘယ်သူ့မှ စိတ်မဝင်စားပေမဲ့ ယောက်ျားပီသတဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ သိပ်မချောလှပေမဲ့ကြည့်ကောင်းတဲ့ မျက်နှာပေါက်နဲ့ ပိုင့်ကို တွေ့ကတည်းစိတ်ဝင်စားနေလို့ အဆုံးစွန်ထိလိုက်လျောလိုက်တာဖြစ်သည်။ တကယ်ပြောရရင် ပိုင့်သည် ဝင့်ဝါအတွက် ဒုတိယမြောက်အဆုံးအစွန် ချစ်မိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်ကျတယ် ဆိုပေမဲ့ ဝင့်ဝါဘယ်သူနဲ့မှအတူမအိပ်ဖူးသေးဘူး သတိုးကလွဲရင် ဒါပေမဲ့သတိုးနဲ့တုန်းကလဲ အပျိုစင်ဘဝသာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာ ဆက်စ်ရဲ့အရသာကို သိပ်မသိခဲ့ သင်္ကြန်တွင်းမူးမူးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာ မို့လို့လားတော့ မသိဘူး။ တွေးလက်စ အတွေးတွေကိုဖျက်လိုက်ပြီး ဝင့်ဝါ ရေချိုးဖို့ အဝတ်တွေကို ချွတ်ချလိုက်ရင်း ကိုယ်လုံးပေါ်မှန် ရှေ့အရောက် ဖွံ့ထွားနေသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်လိုက်မိသည် ရေပန်းကိုဖွင့်ချလိုက်ရင်း ဆပ်ပြာရည်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ ဖော့ပတ်လေးဖြင့်တိုက်လိုက်သည်။ရေပန်းအောက်ပြန်ဝင်လိုက်ရင်း ဆပ်ပြာရည်တွေပေကျံ နေသောနေရာတွေကိုလက်လေးဖြင့် လိုက်ပွတ်လိုက်သည်။ နို့တွေပေါ်ကို လက်အရောက် အို မနေ့က ပိုင်က သူ့လက်တွေနဲ့ငါ့နို့တွေကိုညှစ်ခဲ့တာပဲ အ..အ… ပွတ်နေရင်းကနေ လက်ဖနှောင့်ဖြင့်နို့သီးခေါင်းထိပ်ကလေး ကုို ထိမိချိန်တွင် ကျင်သွားသောခံစားမှုတစ်ခုကိုရလိုက်သည် ထိုခံစားချက်ကိုထပ်လိုလားလာသည် နို့သီးခေါင်း ကို မထိခလုတ် ထိခလုပ်လေးသွားပွတ်လိုက်သည်။ “အာ့…အ….” တဖြည်းဖြည်းခံစားမှုမြင့်တက်လာပြီး လက်တစ်ဖက်က သူ့အလိုလိုအောက်ရောက်သွားသည် ထို့နောက် အကွဲကြောင်းလေးကိုလက်ခလယ်လေးနဲ့ ပွတ်ဆွဲပြီး လက်ဖနှောင့်လေးက အကွဲကြောင်းအပေါ် နေရာလေးကို ဖိကြိတ်ပြီးပွတ်နေသည်။ “အာ့….အာ့…..ကောင်းလိုက်တာ….အဟင့်ဟင့်….အာ့…အ….အ….အား….ရှီး” ဝင့်ဝါတစ်ယောက် လက်တစ်ဖက်က နို့သီးခေါင်းလေးကိုပွတ်ချေနေရင်း အောက်က ပိပိ့ကို သိပ်မကလိလိုက် အရှိန်တက်လာ ကာ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ရင်ထဲ လှိုက်လှိုက်ဖြစ်လာပြီးပြီးသွားလေသည်။စိတ်လျှော့ချလိုက်ကာ နံရံကိုမှီလိုက် လေသည်။ “ဟာ…အခုမှသတိရတယ် ပိုင်နဲ့ချိန်းထားတာပဲနောက်ကျတော့မယ်” ရေချိုးခြင်းကိုလက်စသတ်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို “မိဝင့်ဝါ နင်ကလဲအမြဲအဲ့လိုပဲ” ဟုရေရွတ်နေလေသည်။ “စောင့်နေရတာ ကြာပြီလားပိုင် ဆောရီး တို့ရေချိုးနေလို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်” ဧည့်ခန်းထဲတွင် စာအုပ်ထိုင်ဖတ်နေသော ပိုင်နိုင်မင်းခိုင်ကို လှေကားပေါ်ကနေ ဆင်းလာရင်း စကားပြောလိုက်သည်။
“ရတယ် ဝင့် ကိုလဲ စာအုပ်ဖတ်နေတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး” “ပိုင် ဘယ်သွားမှာလဲ” “ဝင့်ဝါ နဲ့ကိုနဲ့ တစ်ခုခုသွားစားမယ်လေ ပြီးရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်လေ ပြီးရင်….ပြီးရင်….” “ပြီးရင် ဘယ်သွားမှာလဲ ပြောလေ ပိုင်….” “လောလောဆယ်တော့ မသိသေးဘူးလေ အခြေအနေ အရပေါ့” “အင်းပါ ဒါဆိုရင်လဲ အကင်သွားစားရအောင်ပင်လယ်စာအကင် ၇၃လမ်းဘက်ကဆိုင်” “အိုကေလေ သွားစို့ ……….” “ဖြစ်ပါ့မလားပိုင်ရယ် ….တို့ကမှတ်ပုံတင်မပါလာဘူး” “ဖြစ်ပါတယ်ဝင့်ရဲ့ ဆွေကြီးပြောလိုက်တာတော့ အချိန်ပိုင်းဆိုရတယ်တဲ့…….” “ဒါဆိုလဲ ပြီးတာပဲသွားစို့” ဝင့်ဝါနှင့် မုန့်အတူတူသွားစားပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်သည် ခုံကလဲအတွဲခုံဝယ်လိုက်တာ ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်စပြကတည်းက ဘေးနားက အတွဲတွေကအလုပ်ဖြစ်ကုန်ကြသည် ဇာတ်လမ်းကလဲ အချစ် ဇာတ်ကြမ်းဖြစ်နေသည်။ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ဇာတ်လမ်းကလဲအရှိန်ကတက်လာသည်။ စစလာခြင်းကြည့် တုန်းက သူ့ရင်ခွင်ထဲကို ဝင့်ဝါကမှီလို့ သူကလဲဝင့်ဝါကိုယ်လေးကို ကျောဖက်မှသိုင်းဖက်လို့ စကားလေးပြော လက်ကလေးကိုင် ဇာတ်ကားတစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာတော့ ရုတ်တရက်ဝင့်ဝါကချစ်လားဟုမေးသည်။ သူကလဲဝင့်ဝါနှုတ်ခမ်းလေးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်ပြီးချစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်သည်။ ဝင့်ဝါကလဲသူ့ကို ပြန်နမ်းပြီးတော့ ဝင့်လဲချစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်သည်။နောက်တော့ သူနမ်းလိုက် ကိုယ်နမ်းလိုက်နဲ့ အချစ်တွေ ဒီရေတိုးသလိုတိုးတိုက်လာသည်။အနမ်းတွေကြမ်းလာသည်။သူ့လက်တွေကလဲဝင့်ဝါရဲ့ရင်သားတွေကို အင်္ကျီပေါ်မှဆုပ်ကိုင်လိုက် တင်သားတွေကိုညှစ်လိုက်ဖြစ်လာသည်၊ဝင့်ဝါလက်ကလဲ သူ့ပေါင်ကြားကဒုတ်ကို လာပြီးဘောင်းဘီပေါ်မှပွတ်သပ်နေလေသည်။ ကြာလာတော့ အောက်ကကောင်ကြီးကတင်းမာလွန်းအားကြီး လို့အောင့်လာသည် သည်တော့ရုပ်ရှင်တောင်မပြီးသေး ဝင့်ဝါကို ၃၅လမ်းဘက်က အင်းတစ်ခုကိုမလာသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကားမောင်းလာတာရယ် အချိန်နည်းနည်းကြာတော့အောက်ကကောင်ကစောစောက လောက်ကြီးမဖြစ်တော့ ဝင့်ဝါကလဲရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည် သူလဲအေးအေးဆေးဆေး ဆေးလိပ်လေးဖွာ ရင်းဖြင့်တီဗီဖွင့်ကြည့်လိုက်သည် ။ဆေးလိပ်လေးတစ်ဝက်ကျိုးသွားတော့ ရေချိုးခန်းထဲဝင့်ဝါပြန်ထွက်လာ သည် ဝင်သွားတုန်းကလိုတော့မဟုတ်ဝင်သွားတုန်းက ဂျင်းပန်င် အကျပ်နဲ့စပို့အရှပ်နဲ့ ပြန်ထွက်လာတော့ တဘတ်အရှည်ကလေးတထည်ပတ်ပြီးတော့ထွက်လာသည် ။
ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့သူ့ကို မြင်တော့ နှာခေါင်းလေးရှုံကာ “ဝင်သွားတာမှမကြာသေးဘူး……ဆေးလိပ်သောက်နေပြန်ပြီ ပိုင်ရယ်…. .ဆေးလိပ်ကလေးနည်းနည်း လျှော့သောက်ပါလား” ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ဆေးလိပ်ကို ဆွဲယူကာ ပြာခွက်ထဲသို့ ချေပြီး မီးသတ်လိုက်ရင်း ကုတင်ပေါ်တက်လာသည်။ “အမလေး…..ပိုင်ကကွာ သိပ်ဆိုးတာပဲ …..” ကုတင်ပေါ်ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းရောက်နေသော ဝင့်ဝါကို သူ့ ဘက်သို့ဆွဲချလိုက်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ နေရာလှပ်မကျန် နမ်းပလိုက်သည်။ထို့နောက် ဝင့်ဝါကိုယ်ပေါ်ကတဘက် ကလေးကို ဆွဲဖယ်လိုက်ပြီးနောက် ရင်သားတွေကို နမ်းရှုံလိုက်သည် ပြီးတော့ နို့အုံတစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်နဲ့စုပ် ထားပြီးတော့ နို့သီးခေါင်းလေးကို လျှာလေးနဲ့ကလိလိုက်သည်။လက်တစ်ဖက်ကလဲအောက်က အကွဲကြောင်းကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပေးနေသည်။ ဝင့်ဝါထံမှ ညီးညူသံသဲ့သဲ့ထွက်လာ သည်။သူ့ဆံပင်တွေကိုလက်နဲ့ထိုးဖွနေရင်း “အား…..ပိုင် စို့…စို့ ကောင်းလိုက်တာ အားရှီး………” ရုတ်တရက် ဆိုသလို ဝင့်ဝါရဲ့ နို့တွေကို ပါးစပ်ကနေ အလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ ခေါင်းကအောက်ကိုဆင်းသွားသည်။ဝင့်ဝါတစ်ယောက်ပိုင်ရဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းဆွဲ လိုက်ပြီး “ပိုင်…တော်ပြီ” ဝင့်ဝါခေါင်းခါပြသည်၊မလုပ်နဲ့ဆိုသည့်သဘော “ဘာလို့လဲ ကို ဝင့်ဟာလေးကိုနမ်းချင်လို့လေ…..” “တော်ပြီ မနမ်းနဲ့ ပိုင့်ကိုအားနာတယ်” ပိုင်ဘာမှမပြောပဲ ခေါင်းကို ပေါင်ကြားထဲစိုက်ချလိုက်သည် ထို့နောက် အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် လျှာလေးဖြင့် လျက်လိုက်သည်။ အောက်ကနေ အပေါ်ကို ဆန်တက်လိုက် စုန်ဆင်းလိုက်နှင့် တချက်ချက် အထဲကိုလျှာလေးထိုးသွင်းပြီး ကလိလိုက်ဖြင့် ကောင်းကောင်းကြီးမှုတ်ပေးနေလိုက်သည် ။ကျန်သောလက်နှစ်ဖက်က နို့နှစ်လုံးကို ဆုပ်နှယ် ပေးနေသည်။ “အား ကောင်းတယ်ပိုင်….. နယ်ပေးနို့တွေကို အား လျက်လျက်……ကောင်းတယ် အား……အား……” လျက်နေရင်းနှင့် ဝင့်ဝါ ပိပိလေးနဲ့ ပါးစပ်ကို ကပ်စုပ်လိုက်သည်။လျှာကလဲအတွင်းသားတွေကို အပြည့်အဝ လျက်ပေးလိုက်သည်။ ဝင့်ဝါတစ်ယောက်အရမ်းကောင်းလာသည်။သူအရမ်းနမ်းတတ်တာပဲ ဝင့်ဝါကိုနမ်းပေးနေတာ ဝင့်ဝါအစကတော့ တအားယားလာသည်။နောက်တော့ ပိပိထဲသူ့လျှာကြီးဝင်လာတာ အယားပြေသလိုလို နဲ့ ထပ်ပြီးယားလာပြန်ပြီ အား ကောင်းလိုက်တာ အစိလေးကို စုပ်ပေးနေတာ အာ့……….. “အား…အား…ကောင်းလိုက်တာ…အာ့….လျက်လျက် ကောင်းလိုက်တာ ပိုင်ရယ်” “အား……ပြီး..ပြီးပြီပိုင်… ပြီးပြီ အား…ကျင်တယ်အား…မလျက်နဲ့တော့…… အို တော်ပြီဆိုဟင့် အာ့…အား ပိုင်….အား အရမ်းကောင်းတယ်” ပိုင်နိုင်မင်းခိုင်တစ်ယောက်ဝင့်ဝါရဲ့ ပိပိကထွက်လာတဲ့အရည်ကြည်လေးကို ကုန်စင်အောင်လျက်ရင်း အစေ့ကိုဆက်စုပ်ပေးနေတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝင့်ဝါအရှိန်ပြန်တက်လာသည်၊ မဖြစ်တော့ဘူး ဒီတစ်ခါတော့ ဝင့်ဝါ ပိုင်ရဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းဆွဲယူပြီးနမ်းလိုက်သည်။ “ကောင်းလား….ဝင့်ကိုနမ်းပေးတာ” “အင်း….အရမ်းကောင်းတယ် ချစ်ပေးတော့နော်….ပိုင်” “အင်း….” ပိုင်တစ်ယောက် ဝင့်ဝါပေါင်ကြားထဲတွင် နေရာယူလိုက်လေသည် ထို့နောက် သူ့ဒုတ်ဖြင့် ဝင့်ဝါအကွဲကြောင်းတစ်ယောက် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည် ပြီးတော့ ဒစ်ခေါင်းလေးဖြင့်အစိလေးကို ထိုးကလော် လိုက်ရာ “အို…အဟင့်ဟင့် ဘာတွေလုပ်နေလဲ သွင်းတော့ကွာ…အာ့ တော်ပြီ” ဝင့်ဝါစကားအဆုံးတွင် ပိုင်တစ်ယောက်ပြုံးကာ ခါးကိုတစ်ချက်ကော့လိုက်လေသည်။ “ဗြစ်…အား…..”နှစ်လက်မလောက်နစ်ဝင်သွားသည် ဝင့်ဝါထံမှလဲညည်းသံတိုးတိုးလေးထွက်လာသည်။ သူ့ဒုတ်ကိုဆက်မသွင်းသေးပဲ ခနရပ်ပြီး ဝင့်ဝါနှုတ်ခမ်းလေးကိုငုံ့နမ်းလိုက်သည်။ဝင့်ဝါမှ သူကို ပြန်လည်နမ်း ပြီး ဝင့်ဝါလျှာနှင့်သူ့လျှာကလိချိန်တွင် ကျန်နေသည့်အပိုင်းကို ဆောင့်ချလိုက်သည်။ “ဗြစ်….ဒုတ်….အား……” “ဝင်သွားပြီပိုင်…..” “အင်း…..ကောင်းလား” “ကောင်းတယ် ဖြည်းဖြည်းဆောင့်နော်ပိုင်” “အင်း….” ပိုင်တစ်ယောက်ပြောလဲပြောရင်း သူ့ဒုတ်ကို ဒစ်မြုပ်ရုံလောက်ပြန်ဆွဲထုတ်ရင်း တစ်ချက်ချင်းဆောင့်ပေးနေသည်။ “ဖွတ်..ဘွတ်…ဖွတ်…ဘွတ်… ဖွတ်..ဘွတ်…ဖွတ်…ဘွတ်…….” “အင်းးး…..”ဝင့်ဝါတစ်ယောက်ပြန်ပြီး အရသာရှိလာပြန်သည်၊ပိုင်ဆောင့်ချတဲ့အချိန်ကို ပြန်ကော့ကော့ ပေးလာသည်။ “ဆောင့်ဆောင့် ကို….ဝင့်ဝါ ကောင်းလာပြီ..အာ့……အား……” “ဗြစ် ဖွတ်…ဗြစ် ဖွတ်…” “အား ကောင်းတယ်ဆောင့် …အား အား…ကောင်းတယ်ပြီးတော့မယ်” ပိုင်တစ်ယောက် အားပါပါဖြင့် ဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ အချက်ငါးဆယ်ခန့်လောက် အရောက်မှာတော့ ဝင့်ဝါအောက်နေလူးလွန့်ပြီး တအားကော့ပေးနေသည်။ သူသိလိုက်ပြီ ဝင့်ဝါပြီးတော့မယ် “ပိုင့် ပြီးပြီ….အား…ပြီးပြီး…….အား……..” ပိုင်တစ်ယောက်ဝင့်ဝါပြီးပေမဲ့ မရပ်ပဲဆက်ဆောင့်ပေးနေသည်။
သူလဲပြီးတော့မယ် ဝင့်ဝါပိပိ့က ကျန်တဲ့အချိန်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး သူပြီးပြီဆိုရင် စုပ်ဆွဲတာက အရမ်းကောင်းလို့ ဆက်တိုက်ဆောင့်ရင်း သူ့လဲ တောင့်မထားနိုင် ဝင့်ဝါလဲပြီးပြီဆိုတော့ သူလဲ သူ့ ဒုတ်ထဲကသုတ်ရည်တွေကို ဝင့်ဝါပိပိ့လေးထဲပန်းထည့်ပြီးနောက် ဝင့်ဝါအပေါ်မှာပဲ မှောက်ရက်ကြီး အမောဖြေနေမိသည်။ ဝင့်ဝါ အရမ်းကောင်းသွားသည် ပိုင်ကပြီးသွားတာကို မရပ်ပဲဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးနေတော့ သူထပ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ပြီးရသည်။ဝင့်ဝါနဲ့သူ ချစ်လို့ပြီးသွားတော့ သူကဝင့်ဝါအပေါ်ကနေ မှောက်ရက်ကြီး အမောဖြေရင်း ဝင့်ဝါရဲ့မျက်နှာအနှံ နမ်းပြီး ချစ်တယ်လို့ပြောသည်။တော်တော်လေးကြာတော့ သူနဲ့ဝင့်ဝါခုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပြီး ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ဝင့်ဝါကို အိမ်ပြန်ပို့ပြီး ညကျရင် ဖုန်းဆက်မည်ဟုပြောသည်။အခုတော့ သူက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတယ်လို့ပြောသည်။အင်း ခနနေရင် တော့ ဖုန်းဆက်ပြီး သိပ်မသောက်ဖို့ပြောအုန်းမှဟုတွေးရင်း အိပ်ယာပေါ်မှေးကနဲဖြစ်သွားလေတော့သည်…ပြီး။
ကျနော်ခု ၁၇ရှိပြီ။ဆယ်တန်းပြန်ဖြေထားသည်။ စော်မချဖူးသေးပါ။ ဖာချဖို့ကျတော့ ပိုက်ဆံကမရှိ ရှိလည်းမချရဲ။ ထန်လည်းထန်သည်။မိထွေးစောက်ဖုတ်တော့ အနီးကပ်မြင်ဖူးသည်။ကလေး၂ယောက်မွေးထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက နီရဲလန်ပြဲ ကြွက်နားရွက်တွေပင်လိပ်နေပြီ။ ဖင်ကြီးကတော့ကျန်သေးသည်။ဝလာလို့ပိုကိတ်လာသည်။အရမ်းကြီးတော့မဝသေး ပြည့်ရုံသာ။ နို့တွေကနည်းနည်းတော့တွဲနေပြီ။ အဖေနဲ့လိုးကြတိုင်းထချောင်းနေကြဆိုတော့ အကုန်သိနေပြီ။ အမေက ကျနော်၁၀နှစ်လောက်မှာ အဖေနှင့်ကွဲသည်။ ဖင်ဆော့တာအဖေမိပြီး ရိုက်ကြနှက်ကြတောင်ဖြစ်ကြသေးသည်။အဖေက မာနကြီးသည်။ဒေါသကြီးသည်။အမေကို ကွာရှင်းပြီးနှင်ချသည်။ ကျနော့်ကိုအဖွားအိမ်ပို့ ထားလိုက်သည်။အမေကတော့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိရ။အမေ့ကိုတွေ့ချင်ပေမယ့်အဖေ့ဆီမှ အမေ့အကြောင်းပြောသံမကြားရ မေးလျှင်လည်း အရိုက်ခံရသည်။ထိုကြောင့်မမေးရဲ။်ကြာကူလီဘဲကြီးလည်း ခြေထောက်ကျိုးပြီးမယားခိုးမှုနဲ့ထောင်ကျသည်။ အဖေလည်းရိုက်မှုနဲ့ထောင်ကျသည်။ ၆လကြာတော့ လွတ်ငြိမ်းနဲ့တိုးပြီးပြန်လွတ်လာသည်။နောက်၃နှစ် လောက်ကြာတော့ မိန်းမထပ်ယူသည်။ မိထွေးဆိုပေမယ့်ကျနော့်ကိုချစ်သည်။သူများမိထွေး တွေလိုမနှိပ်စက်။အဖေတို့က၃၀ကျော် လုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်တစ်ခုလတ်တွေဆိုတော့ မင်္ဂလာဦးညမှာ ဘုလိုက်ကြတာမှ တဂျိန်းဂျိန်း။ ကျနော်အိပ်နေပြီထင်ပြီး ဘုနေကြတာ။ထရံသာခြားပေ မယ့် ဝါးကြမ်းခင်းဆိုတော့ တစ်ဆက်တည်းလေ။ ကျနော် ငလျင်လှုပ်သည် ထင်၍ကုန်းထသည်။ ပြီးမှအဖေတို့အခန်းထဲမှ တဘွတ်ဘွတ် တဘတ်ဘတ် ကြားတော့မှ အဖေနဲ့မိထွေးလိုးနေကြမှန်းသိရသည်။ […]